Ikhasi le-Fashion Model le-Topmodel Lokubala Umbala Ibhayisikili Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izingane zidinga ukuphefumulelwa njalo. Amakhasi ombala kanye nezincwadi ezimibalalayo zenza umthelela omkhulu ekukhuthazeni ngokuphumelelayo ubuciko bomncinyane wethu. Akukho myalelo wesithupha lapho umntwana ekhulile ngokwanele ukuqala ukudweba noma uma kufanele uqale. Kodwa kubalulekile njalo ukuthi amakhasi enemibala ahlinzekwe avulekele ukuhambisana nezingane. Futhi yilokho kanye lapho siphakamiso sethu samakhasi okubala mahhala wezingane aqala.
Ikhasi lokubala lombala ku-bikini